Ginea: Mitotongana be ny famokarana ara-pambolena ary Manambana ny Mosary noho ny otrikaretina Ebôlà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2015 20:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Deutsch, русский, Français
Ilaina ny fitsaboana maika iadiana amin'ny otrikaretina Ebôlà mba hanakanana ny fihanak'io areti-mifindra io izay mavesatra tokoa ny vokany eo amin'ireo sehatra maro any amin'ireo firenena ahitàna azy. Sarin'ny OMS
Tao anatin'ny tatitra nataony ny 15 febroary, manamarika ny Fikambanana Maneran-tany Misahana ny Fahasalamana fa hatry ny fiandohan'ilay areti-mifindra izay nandripaka an'i Ginea, i Siera Leona sy i Liberia efa ho 14 volana izao, maherin'ny 23.000 ireo tranga voamarina, ahiahiana na koa mety ho tratry ny aretina, izay nitarika fahafatesana mihoatra ny 9.000 voalaza (maro ireo tranga mbola tsy fantatra).
Manomboka mampitanondrika ny toekaren'ireo firenena ireo ity areti-mifindra ity. Manombatombana ny Banky iraisam-pirenena fa hitontaly 1.6 lavitrisa dolara ny fatiantoka mitambatambatra amin'ny fitomboana ho an'ireo firenena telo ireo ny taona 2015, vokatry ny areti-mifindra. Ny taona 2014, nahitàna fitomboan'ny harin-karena mifanesy 2,2% sy 4 isanjato tamin'ny vinavina 5,9% sy 11,3% i Liberia sy Siera Leona talohan'ny krizy. Eo amin'ny sehatry ny ady amin'ilay areti-mifindra, mihamanakaiky ny fandresena amin'ny fihenan'ireo tranga vaovao, noho ny fanampiana iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny tafika amerikana sy ny pôlitikam-pirenena momba ny asa an-tsitrapo, miaraka amin'ny fanokana-monina an'i Siera Leona iray manontolo sy ireo faritra sasany, arahin'ny fanentanana amin'ny fampahalalam-vaovao sy ny fampianarana ny mponina.
Ao Ginea no tena mampitahotra ny toe-draharaha. Raha efa narefo noho ny tao amin'ireo firenena roa hafa ilay tahan'ny fitomboana ny taona 2014, dia nianjera ho 0,5 %, izany raha 4,5 % talohan'ny fihanaky ny aretina, araka ny voalazan'ny Banky Iraisam-pirenena. Mihemotra avokoa ny sehetra ara-toekarena rehetra. Nampitombo ny tsy filaminana ara-tsakafo sady nampavesa-danja ny rahona eo amin'ireo mponina mahantra sy tsy misy mpiaro io fahelan'ny fitomboana io. Any Ginea, maherin'ny 230.000 ireo olona hita fa tsy milamina ara-tsakafo, saingy mampitandrina izy fa mety hahatratra 470.000 io isa io ny volana martsa 2015, raha tsy misy zava-bita. Nahitàna fitotonganana goavana avokoa ny famokarana rehetra, nihena 20% ny famokaram-bary, 25% ny an'ny varimbazaha, antsasany ny an'ny kafe ary iray ampaha-telony kosa ny an'ny kakao.
14 volana taorian'ny nahafatesan'ilay tranga voalohany indrindra, mitohy mihamafy ny fanoheran'ireo mponina, niafara tamin'ny fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana, miaraka amin'ireo maty sy fahasimbam-pananana. Araka izany, tao anaty lahatsoratra navoaka ny 12 febroary, nanamarika tamin'alahelo ireo herisetra nihatra tamin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo ny Hetsika iraisam-pirenena an'ny Vokovoko Mena sy ny “Croissant-Rouge”:
Hatry ny volana jolay 2014, niharanà fanafihana am-polony isam-bolana ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy ao amin'ny Vokovoko Mena ao Ginea, izay niantomboka tamin'ny herisetra am-bava ka hatramin'ny herisetra ara-batana. Ny tranga vao haingana indrindra izao dia izay niseho tany Forécariah ny alahady 8 febroary teo, faritra andrefan'i Ginea. Mpirotsaka asa an-tsitrapo roa avy ao amin'ny Vokovoko Mena gineana no nodarohina raha tonga tao an-tanàna izy ireo mba handamina ny fandevenana araka ny tokony ho izy ary voaaro ny mpikambana iray ao main'ny vondrom-piarahamonina.
Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, niteraka fifandonana ny fangataham-panazavana avy aminà imam iray, voaheloka ho nanao fombafombam-pandevenana taminà olona noahiahiana ho lavon'ny otrikaretina Ebolà. Mampahatsiahy i Bandjou Keith raha mampiseho ireo tranga ao amin'ny vohikala guineeunivers.com, fa:
Tsy voalohany izao no hanehoan'ireo tanoran'i yimbaya [faritra iray ao amin'ny zanabohitr'i Conakry] ny fisalasalan'izy ireo manoloana ny areti-mifindra Ebolà ao an-tanànany. Tsiahivina fa volana maromaro lasa izay, nanao fihetsiketsehana izy ireo enti-manohitra ireo tompon'andraikim-panjakana sy ny kaominalin'i Matoto, ireo tompon'andraikitra misahana ny ady atao amin'ny Ebolà, ireo Ambasadaoron'i Etazonia sy Frantsa ary ireo mpitsabo tsy voasakan-tsisintany (MSF) izay tonga mba hiroso amin'ny fivoriana hanairana mikasika ny fanorenana toby fitsaboana ny Ebolà ao amin'io faritra voalaza io.
Mitatitra tranga iray hita tany Faranah, sahabo ho 450 Km miala an'i Konakry i Sidy BAH avy ao main'ny VisionGuinee.Info:
Toa mihanaka haingana noho ny Ebolà ny otrikaretin'ny tsaho. Avy ao Konakry mankany Coyah, mandalo an'i Dabola sy Faranah, mahazo laka ny mpanely tsaho. Ny zoma teo, niakatra ny tosidrà tao Faranah izay nanafihan'ireo mpianatra nisahotaka ny Toby Famindrana Ireo Voan'ny Ebolà tao an-toerana.
Araka ny voalazan'i Sidy Bah, tsaho niely tany amin'ireo sekoly amin'ny kaominin'i Faranah izay mampandre ny fahatongavan'ny andianà mpitsabo mba hanao vakisiny ireo mpianatra no nitarika ireo herisetra. Tao anaty lahatsorany, manome ny antsipiriany mikasika izay nahatonga ny savoritaka izy:
Norobain'ireo mpianatra romotra ny Foibe Famindrana Ireo Voan'ny Ebolà, mbola tsy vita akory, teo akaikin'ny cité Niger. Kely foana no tsy nahavoan'ny fitsaram-bahoaka ireo andianà Mpitsabo tsy voasakan-tsisintany tonga hampandeha ny Foibe.Nodoran'ireo andian'olona romotra ny fiaran'izy ireo. Raha izao fandehan-javatra izao dia mizotra mankany amin'ny tsifahombiazana tanteraka ity paikady “Tsy misy Ebolà ao anatin'ny 60 andro” ity raha tsy misy hetsika atao hamongorana ireo tsaho.
Indrisy fa ohatra vitsivitsy monja mikasika ireo herisetra fotsiny ireo voalaza ireo, izay hita manerana ny firenena manontolo mihatra amin'ireo tarika misahana ny fahasalamana. Nandritra ny herinandro izay nifarana ny 15 febroary teo, nitatitra ny OMS fa nahitàna olana amin'ny fandriampahalemana iray raha kely indrindra tao anatin'ireo prefektiora 13.
Nandritra ny fanambarana ny fiantombohan'ny fanalàna ireo tafika amerikanina dia namintina ireo ezaka voaray nandritra ny ady tamin'ny loza tao amin'ireo firenena telo ireo ny Filoha amerikanina Barack Obama, nanazava izy fa tao Ginea no lava indrindra ny làlana nizorana. Raha namakafaka io lahateny io ao anatin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny guineenews.org i Amadou Tham Camara, dia nahamarika fa:
Hatry ny niantombohan'ilay areti-mifindra, valaketraka ny fandrindram-pirenena momba ny ady amin'ny Ebolà, izay tsy mitsahatra ny mihatara lava hatrany. Ireo paikady nokonokononina nomanin'i Dr Sakoba mba hiadiana amin'ny Ratsy ao anatin'ny enim-bolana, tao anatin'ny 90 andro ary ankehitriny 60 andro dia toa tsy nahitam-bokany avokoa, ireo sasany mihoatra noho ireo hafa.Noho ny tsy fahafahana mandrava ny fihanaky ny aretina, tapa-kevitra ny fandrindrana, tao anatin'ny hakiviana, ny hangina, efa volana maro izay, mikasika ny isan'ireo olona “mampifandray” (ireo mety harary) anatin'ireo vaovao omeny isan-kerinandro. Izay azo antoka fa, mba tsy hanafintohina ireo mora tohina.
Saingy, amin'io fandehan-javatra io, mampino avokoa ny zavatra rehetra fa tahaka ilay marary voalohany indrindra, ny mararin'ny Ebolà farany dia ho….. Gineana.
Teny faneva noraisin'ireo filoham-pirenena telo isany tena niharam-boina, mba ho tratrarina nanomboka ny 15 febroary ny “Tsy Misy Ebolà ao anatin'ny 60 andro”. Amin'izao fotoana izao, noho ny tsy fahampian'ny vaovao sy ny fanentanana, miharatsy hatrany ny zava-misy any Ginea.
Ankoatra ireo fifanoherana misy eo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo herisetra atao amin'ny mpitsabo, nahitana trangan'aretina amin'ireo faritra izay tsy voarakitra velively tao anatin'ireo rakitra ofisialy nomanina mialoha. Ohatra, manamarika ny tranonkala internationalsos.com fa nandritra ny herinandro faran'ny 8 febroary teo, 18 isanjaton'ny tranga monja no voaray avy tamin'ireo faritra efa tratran'ny aretina, raha toa ka tokony ho 100 isanjato io isa io amina toe-draharaha novinaniana.
Manazava ireo loza mety hitranga ny OMS fa raha toa ka matin'ny otrikaretina ireo olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy dia tsy midika fotsiny izany hoe tsy naharay fitsaboana izy, fa koa mety ho tratran'io otrikaretina io ireo olona hafa ao anatin'ilay vondrom-piarahamonina. Maherin'ny 30 ireo fasana mampidi-doza voarakitra, ary 21 ireo maty no hita tany anivon'ny vondrom-piarahamoninafa tsy teny amin'ireo tombim-pitsaboana.
Izany no manaporofo fa na dia eo aza ireo lahateny ofisialy, mbola lavitra ny fifehezana ny toe-draharaha. Tsy ny vahoaka no tokony homen-tsiny, fa ireo tompon'andraikitra izay nametra ny andro hiadiana amin'ny otrikaretina, saingy tsy nampita vaovao ampy na ny fomba mahomby tokony hamongorana azy.